Manorina fanorenana mafy orina
“Mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana” Efes. 4:14
Miteny amintsika amin’ny alalan’ny Teniny ny feon’Andriamanitra, na dia maro aza ireof eo henontsika; fa nilaza Kristy fa tokony hitandrina isika amin’ireo milaza fa indro aty na ary i Kristy. Koa ahoana ary no hahafantarantsika fa tsy fahamarinana izy ireo raha tsy ampitahaintsika amin’ny soratra Masina ny zavatra rehetra? Nampitandrina antsika Kristy amin’ireo mpaminany sandoka izay avy amin’ny anarany ka milaza fa izy ireo no Kristy.
Koa ankehitriny raha mihevitra ianao fa tsy ilaina ny hahafantaranao ny Soratra Masina dia hotandindimin-doza ianao fa voafitak’ireo fampianarana ireo; Nilaza Kristy fa hisy ireo hilaza amin’ny andro fitsarana hoe: “Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa annao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay?” Nefa hoy i Kristy: “Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: tsy mba fantaro akory hianareo hatrizay; mialà amiko, hianareo mpanao meloka” Mat. 7:22,23
Tonga ny fotoana hanaovan’i Satana fahagagana eo imasonao, hilaza fa izy no Kristy; ary raha sanatria tsy miorina tsara eo amin’ny fahamarinan’andriamanitra ny tongotrao dia hanalavitra ny fanorenanao ianao. Ny hany azo antoka ho anao dia ny mandinika ny fahamarinana ho toy ny harena miafina. Mihadia fahamarinana tahaka ny tokony hataonao amin’ny haren’ny tany, ary ento eo anatrehan’ny Rainao izay any an-danitra ny Tenin’Andriamanitra, dia ny Baiboly, ary miresaha aminy hoe: hazavao aho ary ampianaro ahy ny fahamarinana.
Ary raha mitoetra ao am-ponao ny Fanahy Masina, hanazava ny fahamarinana amin’ny fanahinao, dia tsy hanadino izany mora foana ianao. Hahazo fanandramana amin’ny fandinihana ny Soratra Masina toy izany ianao, ary miorina tsara ny zavatra rehetra. Ary tena zava-dehibe ny hanohizanao ny fandinihana ny Soratra Masina. Tokony hotahirizinao ao an-tsaina ny Tenin’Andriamanitra, satria mety hitokana ianao ary hitoetra amin’ny toerana tsy hanananao tombontsoa hiaraka amin’ireo zanak’Andriamanitra . Koa irinao ny haren’ny Tenin’Andriamanitra hiafina ao am-ponao, ary raha manafotra anao ny fanoherana, dia ilainao ny miatrika izany miaraka amin’ny Soratra Masina.